OTU ESI ABANYE BIOS NA LAPTỌỌPỤ ACER - BIOS - 2019
Tinye BIOS na laptọọpụ Acer
Mgbe ị na-arụ ọrụ na kọmpụta, ọ bụghị ndị ọrụ niile na-elebara ntinye anya na iwepụ ihe omume, ụfọdụ n'ime ha amaghịkwa otú e si eme ya. Ma arụnyere na-ezighị ezi ma ọ bụ ngwanrọ arụnyere nwere ike imetụta ọrụ nke sistemụ arụmọrụ ma belata ndụ ya. Ka anyị hụ otú e kwesịrị isi rụọ ọrụ ndị a na PC na-agba Windows 7.
E nwere ọtụtụ ụzọ isi wụnye akụrụngwa, dabere na ụdị installer. N'ọtụtụ ọnọdụ, a na-eme usoro nhazi nwụnye "Wizard Wụnye", ọ bụ ezie na e nwere ụzọ ndị onye ọrụ na-ewe obere akụkụ. Tụkwasị na nke ahụ, a na-akpọ ihe ndị a na-akpọ ngwa ngwa nke na-anaghị achọ nkwụnye ma na-aga n'ihu ozugbo ịpị faịlụ ahụ.
A kọwara ụdị algorithms dị iche iche maka ịwụnye software na kọmputa na Windows 7 n'ụzọ zuru ezu n'okpuru ebe a.
Usoro 1: "Wizard Wụnye"
Algorithm arụmọrụ software mgbe ị na-eji ya Wizards Wụnye nwere ike ịdị iche na-adabere na ngwa a na-arụnyere. Mana n'otu oge ahụ, atụmatụ izugbe yiri nke ahụ. Ọzọ, anyị na-atụle usoro maka itinye ihe ngwa ngwa nke ngwa a n'ụzọ kọmputa na Windows 7.
Nke mbụ, ịkwesịrị ịmepụta faịlụ installer (ntinye) nke usoro ịchọrọ ịwụnye. Dịka iwu, faịlụ dị otú ahụ nwere ndọtị EXE ma ọ bụ MSI ma nwee okwu ndị dị n'aha ha "Wụnye" ma ọ bụ "Mbido". Gbaa na "Explorer" ma ọ bụ onye njikwa faili ọzọ site na ịpị ugboro abụọ na bọtịnụ òké aka ekpe na ihe.
Mgbe nke ahụ gasịrị, dị ka a na-achị, windo nke ndekọ ndekọ njikwa na-emepe (UAC), ma ọ bụrụ na ị nwebeghị nkwarụ ya. Iji kwado ihe na ịmepụta installer, pịa bọtịnụ. "Ee".
Ọzọkwa, dabere na onye na-achọta ihe, ma window nke nhọrọ asụsụ ga-emeghe ma ọ bụ ozugbo "Wizard Wụnye". N'okwu mbụ, dị ka a na-achị, a na-ekwu na ọ bụ ndabara (ọ bụrụ na usoro ihe a akwadoro), ma ị nwere ike ịhọrọ ọ bụla ọzọ na listi ahụ. Mgbe emechara nhọrọ, pịa bọtịnụ ahụ. "OK".
Mgbe ahụ, windo a na-anabata ga-emeghe. Wizards Wụnyeonye interface ya ga-agbanyelarị asụsụ a họọrọ na nzọụkwụ gara aga. Na ya, dịka iwu, naanị ịkwesịrị ịpị "Na-esote" ("Na-esote").
Mgbe windo nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ mepee. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịmatakwu ederede ya, nke mere na n'ọdịnihu ọ gaghị enwe nghọtahie mgbe ị na-eji ngwaahịa software. Ọ bụrụ na ị kwenyere na ọnọdụ ndị akọwapụtara, ịkwesịrị ịlele igbe nlele kwekọrọ ekwekọ (ma ọ bụ rụọ ọrụ bọtịnụ redio), wee pịa "Na-esote".
N'otu oge na "Ọkachamara" Enwere ike igosi window nke a ga-agwa gị ka ị rụnye mgbakwunye ngwanrọ ọ bụghị metụtara ngwaahịa. Na, dị ka a na-achị, arụnyeghị ndabara nke mmemme ndị a gụnyere. Ya mere, ozugbo i rutere n 'nzọụkwụ a, ọ dị mkpa iji wepu aha niile ngwa ndị ọzọ ka ị ghara iburu kọmputa ahụ site n'ịwụnye ngwanrọ na-enweghị isi. Dị ka o kwesịrị ịdị, ọ bụrụ na ịchọrọ ngwa ngwa ndị dị otú ahụ ma chee na ọ dị mma, mgbe ahụ na nke a, ị ga-ahapụ akara na-abụghị aha ya. Mgbe ịbanye na ntọala dị mkpa, pịa "Na-esote".
Na nzọụkwụ ọzọ, ị ghaghị ịkọwa ndekọ ebe nchekwa ahụ na ngwanrọ ị ga-arụnyere dị. Dịka iwu, site na ndabara, ọ na-agbaso nchekwa nchekwa maka mmemme Windows - "Faịlụ mmemme", ma mgbe ụfọdụ, nhọrọ ndị ọzọ dị. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ịchọrọ, ịnwere ike ịnye ndekọ ndekọ diski ọ bụla ọzọ iji kwado faịlụ ngwa, ọ bụ ezie na enweghị mkpa pụrụ iche anyị anaghị akwado ime nke a. Mgbe edechara faịlụ faịlụ a, pịa "Na-esote".
Na nzọụkwụ na-esonụ, dịka iwu, ị ga-ezipụta ihe ndekọ menu "Malite"ebe a ga-etinye akara label. Ọzọkwa, enwere ike ịme ka itinye akara ngosi software na "Desktọpụ". Ọtụtụ mgbe a na-eme nke a site n'ịlele igbe nlele ahụ. Iji malite usoro nrụnye ozugbo, pịa "Wụnye" ("Wụnye").
Nke a ga-amalite ntinye ngwa ahụ. Oge ya na-adabere n'ogo faịlụ ndị a ga-arụnyere na ike nke PC, site na pasent nke nke abụọ na ogologo oge. E nwere ike ịhụ na e nwere ike itinye ya na "Wizard Wụnye" eji ihe ngosi eserese. Mgbe ụfọdụ, a na-enye ozi dị ka pasent.
Mgbe echichi na "Wizard Wụnye" A na-egosipụta ozi ọma. Dị ka usoro, site na ịtọpụta igbe, ị nwere ike ịhazi mbido nke ngwa ahụ awụnyere ngwa ngwa mgbe ị mechisịrị windo dị ugbu a, yana ịmepụta oge ndị ọzọ. Mgbe emechara ihe niile dị mkpa, ịpụ na windo ahụ "Nna ukwu" pịa "Emere" ("Emecha").
Na ntinye nke ngwa a nwere ike nyocha zuru ezu. Ọ ga-amalite ma ọ bụ na akpaghị aka (ọ bụrụ na ị kwuru kpọmkwem ntọala dị na "Ọkachamara"), ma ọ bụ site na ịpị ụzọ mkpirisi ya ma ọ bụ faịlụ a na-eme.
Ọ dị mkpa: N'elu e gosipụtara usoro ihe omume nke algorithm "Wizard Wụnye", ma mgbe ị na-eme usoro a n'ụzọ dị otú a, ngwa ọ bụla nwere ike inwe nuances ya.
Nzọụkwụ 2: Ntọala Silent
A na-arụ ọrụ nkwụsịtụ na ntinye aka onye ọrụ na usoro nhazi ahụ. O zuru ezu iji mee ka edemede, faịlụ ma ọ bụ iwu kwekọrọ na ya, a gaghị egosikwa windo ndị ọzọ n'oge usoro ahụ. Ọrụ niile ga-eme zoro ezo. N'eziokwu, n'ọtụtụ ọnọdụ, nkesa software akọwapụtaghị egosi na ohere dị otú ahụ dị, ma mgbe ị na-arụ ọrụ ndị ọzọ, onye ọrụ nwere ike ịmepụta ọnọdụ ndị dị mkpa maka nkwụnye ọgbaghara ịmalite.
Enwere ike ịmalite ịme mkpuchi site na iji usoro ndị a:
Okwu mmeghe na "Iwu Iwu";
Ihe odide ederede na faịlụ na BAT ndọtị;
Ịmepụta archive na-ewepu onwe ya na faịlụ nhazi.
Enweghị otu algorithm maka ịme nrụnye nke ọma maka ụdị software ọ bụla. Ihe omume doro anya na-adabere n'ụdị onye na-eji ihe eji emepụta faịlụ ahụ. Ndị kasị ewu ewu na ha bụ:
Wụnye InstallAware Studio;
Ya mere, iji mee ka nwụnye "ọgbachi" site n'itinye installer ahụ, jiri aka nke NSIS na-enye gị aka, ị ga-achọ ime ihe ndị a.
Gbaa ọsọ "Iwu Iwu" n'ihi onye nchịkwa. Tinye ụzọ zuru ezu na faịlụ nwụnye ma gbakwunye àgwà ahụ na okwu a / S. Dịka ọmụmaatụ, dị ka nke a:
C: MovaviVideoConverterSetupF.exe / S
Pịa igodo Tinye.
A ga-arụ ọrụ ahụ n'enweghị windo ndị ọzọ. Eziokwu ahụ na arụnyere ngwa ahụ ga-egosi na ọdịdị nke nchekwa dị na diski ike ma ọ bụ akara ngosi "Desktọpụ".
Maka mmezi nke "nkwụsị" site na ịmepụta installer kere site na iji InnoSetup wrapper, ịkwesịrị ịme otu omume ahụ, naanị kama ikwu ya / S jiri agwa / ỌZỌ, na MSI chọrọ ntinye isi / qn.
Ọ bụrụ na ị na-agba ọsọ "Iwu Iwu" ọ bụghị n'ihi onye nchịkwa ma ọ bụ usoro ndị a n'elu ga-eme site na windo Gbaa ọsọ (igbagha Nweta + R), na nke a, ị ga-ekwenyekwa na ịpalite ihe nkwụnye ahụ na windo UACdị ka akọwapụtara na Usoro 1.
Dịka e kwugoro, enwerekwa usoro nke "nkwụsịtụ" n'iji faịlụ na mgbati BAT. Maka nke a, ị ga-eme ya.
Mepee folda ahụ "Ụdị".
Ọzọ, pịa akara Notepad.
Na mpempe ederede ederede mepee, dee iwu:
Wee tinye ohere ma dee aha zuru ezu nke ngwa nchịkọta nke ngwa ngwa ahụ chọrọ, tinyere mgbatị ya. Tinye oghere ọzọ tinye otu n'ime àgwà ndị ahụ anyị nyochara mgbe iji usoro ahụ "Iwu iwu".
Ọzọ, pịa menu "Njikwa" ma họrọ "Zọpụta Dị ka ...".
Igwe nchekwa ga-emeghe. Gaa na ya n'otu ndekọ ahụ dịka onye nhazi. Site na ndetu ndepụta na ubi "Ụdị Njikwa" họrọ nhọrọ "Faịlụ niile". N'ọhịa "Filename" tinye aha aha na onye nhazi ahụ nwere, dochie ndọtị na BAT. Ọzọ, pịa "Chekwa".
Ugbu a ị nwere ike imechi Notepadsite na ịpị akara ngosi nso nso.
Ọzọ, meghee "Explorer" na ịnyagharịa na ndekọ ebe ebe ohuru faịlụ na bọtịnụ BAT dị. Pịa ya n'otu ụzọ ahụ dị ka mgbe ịmalite usoro ihe omume ahụ.
Mgbe nke a gasịrị, a ga-eme usoro nkwụnye "ọgbachi" dịka mgbe eji "Iwu iwu".
Nzọụkwụ 3: Ntinye ntinye
Ihe ngwọta na-esonụ maka ọrụ ahụ bụ site n'ịwụnye ihe omume ihe omume ozugbo. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, ị detuo faịlụ na nchekwa niile nke ngwa ahụ na nkwụsị na-esotebeghị site na diski ike na onye ọzọ na-enweghị onye na-eme ihe.
Otú ọ dị, aghaghị m ịsị ozugbo na usoro ihe omume nke a ga - arụ ọrụ agaghị arụ ọrụ mgbe niile, dịka ọ dị na ntinye nhazi, a na - emekarị ntinye na ndekọ, na n'oge ntinye nhazi, a na - emegharị nzọụkwụ a. N'ezie, enwere ike ịmebata ntinye ndekọ na aka, ma ọ chọrọ ezigbo ihe ọmụma na mpaghara a. Tụkwasị na nke ahụ, enwere nhọrọ ndị dị mfe ma dị mfe karịa anyị kọwara n'elu.
Ugbu a, ka anyị chọpụta otu ị ga-esi wepụ ngwa ngwa awụnyere na diski ike nke kọmputa ahụ. N'ezie, ị nwere ike iwepụ site na ihichapụ faịlụ na nchekwa site na diski ike, mana nke a abụghị nhọrọ kachasị mma, dịka a ga-enwe ọtụtụ "mkpofu" na ntinye na-ezighị ezi na ndekọ ndekọ usoro, nke ga-eme n'ọdịnihu na OS. A gaghị akpọ usoro a ziri ezi. N'okpuru ebe a, anyị ga-ekwu banyere nhọrọ ziri ezi maka iwepụ ngwanrọ.
Usoro 1: Nwepu onye nchịkọta ngwa
Nke mbụ, ka anyị hụ otu esi ewepu software site na iji onye nchịkọta nke ya. Dị ka a na-achị, mgbe e debere ngwa na folda ya, a na-ejikọta ihe ntinye dị iche iche na mgbakwunye .exe, nke ị nwere ike wepu software a. Aha nke ihe a na-agụnye okwu ahụ "wepu".
Iji mee ka onye uninstaller ahụ, pịa faịlụ ya ugboro abụọ na bọtịnụ òké aka ekpe "Explorer" ma ọ bụ onye njikwa faili ọzọ, dị ka mgbe ịmalite ngwa ọ bụla.
A na - enwekarị mgbe a ga - agbakwunye ụzọ ntinye iji malite ịtọpụ na folda nke usoro kwekọrọ na menu "Malite". Ị nwere ike ịmalite usoro site na ịpị abụọ na ụzọ mkpirisi a.
Mgbe nke ahụ gasịrị, windo ahụ na-ewepughị emepe ga-emeghe, nke ịkwesịrị ikwenye omume gị iji wepụ ngwa ahụ site na ịpị bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
A ga-ewepu usoro mmeghe, mgbe nke a gasịrị, a ga-ewepụ software ahụ na diski ike PC.
Ma usoro a adịghị adaba maka ndị ọrụ niile, ebe ọ dị mkpa icho maka faịlụ nchịkọta, ma dabere na ngwanrọ ahụ, ọ nwere ike ịbanye na akwụkwọ ndekọ dị iche iche. Tụkwasị na nke a, nhọrọ a anaghị ekwe nkwa iwepụ kpamkpam. Mgbe ufodu, enwere ihe di iche iche na ihe ntinye aha.
Usoro nke 2: Software pụrụ iche
Ị nwere ike iwepụ mmejọ nke usoro gara aga ma ọ bụrụ na ị na-eji ngwanrọ pụrụ iche maka iwepu mmemme nke ezube iji wepụ software ahụ kpamkpam. Otu n'ime ụlọ ọrụ kachasị mma nke ụdị a bụ Wepụ Ngwá Ọrụ. N'ihe atụ ya, anyị na-atụle ihe ngwọta nke nsogbu ahụ.
Gbaa Ngwá Ọrụ Nwepu. Ndepụta ngwa nke arụnyere na kọmputa ahụ ga-emeghe. Ọ ga-achọta aha nke software ịchọrọ iwepụ. Iji mee nke a ngwa ngwa, ị nwere ike ịmepụta ihe niile dị na ndepụta ahụ site na ịpị aha aha kọlụm ahụ "Mmemme".
Ozugbo achọtara usoro a chọrọ, họrọ ya. Ozi gbasara software a ahọrọ ga-apụta n'akụkụ aka ekpe nke windo ahụ. Pịa na ihe "Wepụ".
Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ ga-achọta na kọmputa na uninstaller ọkọlọtọ nke ngwa ahọrọ, nke a tụlere na usoro mbụ, ma malite ya. Ọzọ, ị ga-arụ ọrụ ndị anyị kwurula n'elu, na-agbaso ndụmọdụ ndị e gosipụtara na windo uninstaller.
Mgbe onye nchịkọta nke ọkọlọtọ ahụ wepụrụ software ahụ, Ngwá Ọrụ Wepụ ga-enyocha usoro maka ihe ndị ọzọ (nchekwa na faịlụ), tinyere ntinye ndekọ nke enwere ike ịhapụ site na usoro ihe omume.
Ọ bụrụ na achọpụtara ihe ndị fọdụrụnụ mgbe ị nyochachara, ndepụta nke ha ga-emeghe. Iji kpochapụ ihe ndị a pịa "Hichapụ".
Mgbe nke ahụ gasịrị, a ga-ewepụ ihe niile usoro ihe omume ahụ na PC, bụ nke na njedebe usoro ahụ ga-agwa ozi na windo Ngwá Ọrụ Wepụ. Naanị ị ga-agbanye bọtịnụ ahụ. "Mechie".
Nke a kpamkpam iwepu ngwanrọ site na iji usoro mmemme Wepụ Ngwaọrụ. Iji usoro a eme ka o doo anya na ị gaghị enwe ihe ọ bụla nke ngwanrọ dị na kọmputa gị, nke ga-emetụta ọrụ nke usoro ahụ dum.
Ihe omumu: Uzo di iche iche iji wepu software site na PC
Usoro 3: Iwepụ iji Integrated Windows ngwaọrụ
I nwekwara ike iwepu ngwa ahụ iji ngwaọrụ nke Windows 7, nke a na-akpọ "Wepu usoro".
Pịa "Malite" ma gaa ịkọwa "Ogwe njikwa".
Na windo meghere na ngọngọ ahụ "Mmemme" pịa ihe "Wepu usoro".
Enwere nhọrọ ọzọ ịmepe window ahụ achọrọ. Iji mee nke a, pịnyere Nweta + R nakwa n'ọhịa nke ngwá ọrụ na-agba ọsọ Gbaa ọsọ tinye:
Ọzọ, pịa ihe ahụ "OK".
A na-emepe akpọrọ "Wepu ma ọ bụ gbanwee ihe omume". N'ebe a, dịka na Ngwá Ọrụ Wepụ, ịkwesịrị ịchọta aha nke ngwanrọ achọrọ. Iji wuo ndepụta niile n'usoro ederede, wee mee ka ọ dịrị gị mfe ịchọ, pịa aha kọmpụ "Aha".
Mgbe edechara aha niile na usoro a chọrọ ma ịchọta ihe achọrọ, họta ya wee pịa mmemme ahụ "Hichapụ / gbanwee".
Mgbe nke ahụ gasị, ihe nchịkọta ọkọlọtọ nke ngwa ahụ ahọpụtara ga-amalite, nke anyị ji ama ụzọ abụọ gara aga. Mee ihe niile dị mkpa dị ka ndụmọdụ ndị egosipụtara na windo ya, a ga-ewepu software ahụ na diski ike PC.
Dịka ị pụrụ ịhụ, enwere ọtụtụ ụzọ isi wụnye na iwepu ngwanrọ na PC na-agba ọsọ Windows 7. Ọ bụrụ na ịchọta, dịka iwu, ọ dịghị mkpa ka ị gabiga nnukwu nsogbu ma ọ ga-ezuru iji ọrụ kachasị mfe rụọ ọrụ "Nna ukwu", mgbe ahụ maka nkwụsị nke ngwa ngwa, ọ nwere ike ịba uru iji ngwanrọ pụrụ iche, nke na-eme ka nhichapụ zuru ezu na-enweghị na-adị n'ụdị "ọdụ" dị iche iche. Mana enwere ọnọdụ dị iche iche nke na-esiteghị na usoro ịwụnye ma ọ bụ wepu software nwere ike ịdị mkpa.